” ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ………အဘတို့ရယ်…” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” ပြောပြချင်လွန်းလို့ပါ………အဘတို့ရယ်…”
Posted by စိန္ၾကက္ဆင္ on Nov 12, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 19 comments
တကယ်ကို ပြောချင်လွန်းလို့ပါ …
တခါတည်း ကြိုပြီး မေတ္တာရပ်လိုတာက စာအရေးအသား သိပ်မတတ်တဲ့ အခါကျ ဆဲသလိုများ ဖြစ်နေရင် ခွှင့်လွှတ်ပေးပါလို့ နော …….. ။
အဘဘယ်က စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲ ကျနော်လဲ မသိပါ။ နယ်တွေဘက်မှာတော့ အဘဆိုတာ အဖေကို ခေါ်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဆိုတော့ အဘလို့ အခေါ်တပ်တဲ့အခါ အဖေလို့ အဓိပ္ပါယ်ရစေတယ်ထင်တယ်။ ကျနော်တော့ အမေ့ကို အားနာလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ တသက်လုံး အဘ မခေါ်ခဲ့ဖူး။ အတင်းအကျပ် မဟုတ်တောင် မခေါ်မနေရလို ဖြစ်နေတဲ့ အစိမ်းရောင် အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ၁၃နှစ်ကျော် နေခဲ့တာတောင် တခွန်းမှ မခေါ်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းဆင်းပြီးလို့ တာဝန်ကျတဲ့ တပ်ရောက်ရောက်ချည်း တပ်ရင်းမှူးကို “ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး” ” ဟုတ်ကဲ့တပ်ရင်းမှူး” အလိုဘဲ ခေါ်ခဲ့တယ် တိုင်းမှူးလဲ ဗိုလ်ချုပ်ဘဲ … သူ့ထက်ကြီးလဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး … ကစထမှူးကြီး …. ဝန်ကြီးချုပ် အဲ့လိုဘဲတပ်ခေါ်တယ်။ ကိုယ့်လစာကိုယ်စား ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ရင်း ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရတာ ဘယ်သူ့မှ အဖေလို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေသော အမည်နာမကို ပေးမသုံးနိူင်ဘူး။ အဲ့လိုမခေါ်ခဲ့လို့လဲ ရာထူး၊ လစာ ဘာတခုမှ မလျော့သွားခဲ့ဖူးဘူး။ တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ထူးထူးဆန်းမေးလာတတ်တယ် ဒါလဲ အနည်းစုပါဘဲ။ ဘယ်သူမှတော့ ငါ့ကို “အဘ” လို့ ဘာလို့မခေါ်တာလဲလို့ မမေးကြပါဘူး …………။
အဘက ….. လေ
ကျနော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ နေရာဌာနတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမတော့ ဟိုးတပ်ချုပ်ကြီးကနေ အောက်တပ်ရင်းမှူးအထိ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဝန်ကြီးကနေ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အထိ စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းပြောရင်ဖြစ်ဖြစ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမှာဖြစ်ဖြစ် ….
အဘတို့ကလေ ….. စသဖြင့် အပြောအဆို အသုံးအနှုန်းမျိုး တခါမှ မကြားဖူး၊ မတွေ့ဖူးဘူး ….. ။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားနဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဘယ်ဟာက တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ မေးလာခဲ့ရင် ကျနော်ကတော့ လူကိုလူလို့ဘဲ မြင်တာမို့ အတွေ့အကြုံကိုဘဲ ဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ ဆိုတော့ အသက်အရွယ်တွေ ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ အတွေ့အကြုံတွေ များလာပီပေါ့ကွာလို့တော့ လူပြိန်းနည်းနဲ့ ပြောလာမယ်ဆိုရင်တော့ ယေဘူယျ သဘောတော့ လက်ခံလို့ရပေမဲ့ ကျနော့်အသက် ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝ၊ ပတ်ဝင်းကျင်တွေမှာတော့ အသက်ကြီးတိုင်း အတွေ့အကြုံများပီး ရင့်ကျက်တဲ့ သူတွေကြီး သက်သက် မတွေ့ဘူးပါ။ အသက် ၁၅နှစ်သားကစလို့ အခုလက်ရှိအထိ အဖ ၁၀၀ဝ အမိ ၁၀၀ဝ သား/သမီးတွေနဲ့ ထိတွေ့လုပ်ကိုင်လာရတာ ကိုယ်တွေ့မို့ ရဲရဲကြီး ဆိုဝင့်သဗျာ။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေတောင် အသက်အရွယ်ထက် ဝါကို ဦးစားပေးရသေးတာ … ကိုယ်လည်း ဘုရားသားတော်ပီပီ ဝါကြီးတာဘဲ ဦးစားပေနိူင်ပါတယ် …..
ကျနော် ကြားဖူးတဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအစွဲထဲမတော့
သများတို့က ….. လေ ဆိုတဲ့ အိမ်သူသက်ထား အချစ်ရဆုံး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်ကာ ကြားယောင်နေမိပါကြောင်း ….။
အဘတို့ရေ …….. အမျှ …. အမျှ ….. အမျှ
သာဓု..သာဓု…သာဓု…. အဲ..နာက အဘမှ မဟုတ်ပဲ…
Good …Good … Good…
ဒီမှာလည်း.. ပြောပြချင်လွန်းလို ့.. ဆိုသူတစ်ယောက်….
ပြောပြချင်လွန်းလို ့ပါ.. အံစာဒုံးရယ်…ဆိုတာ..လာမယ်..
15 ရက်နေ ့မှာ..
ပြောပြချင်လွန်းလို ့ပါ.. ဦးဆာမိရယ်… ဆိုတာ..လာမယ်…
အဘ ​တော်​လှန်​​ရေး !!!¡¡¡
ဆိုက်ကား လို့ ဆက်ခေါ်တယ်။
အဲ အဘ လို့ခေါ်စေချင်တဲ့သူကို အဘလို့
အ့ ဘာ့ လို့ ဆက်တွေးတယ်
မိုက်ကယ်ဂျော်လကီအောင်ပု ကတော် ခင်ခက်ခက်ခေါကတော့ အဘတော်လှန်ရေးကြီး စလိုက်ပါဘီ…. အမျှ အမျှ အဲလေ သာဓု … ဒါနဲ့ အမျှဝေရမှာလား သာဓုခေါ်ရမှာလား ငင်င်င်င်…
အင်း…ကိုရဲစည်ပြောလဲ ပြောချင်စရာ….ခုတလော အဘတွေ သိပ်များလာတာနဲ့ ..ကျော်တောင် အဘဆော လုပ်မလားလို့ ..ကွကိုယ်…အဟိဟိ
အဘအားလုံးဂို ကပုက ချီးမြှင့်မလို့ဆိုလား… ဘာချီးမြှင့်မလဲတော့ ကွကိုယ်မေးကျိ…
သားလေး Wow ကလဲ….. အဟိဟိ ..အဘဆောတို့က နီကိုးတစ်အုပ်နဲ့တောင် …ဘာဆိုဘားမှမဖစ်..အဟိဟိ
တားဆိုရင်တော့ လိမ်ဗျံစပါယ်ယာမေဂျီးဂို သယ်မှာနော်
သာဓု သာဓု သာဓု … ပို့စ်​ကို သာဓု​ခေါ်တာ​နော်​ . . .
ဘယ်​အဘကမှလည်​း သား​လေး. သမီး​လေး မ​ခေါ်ဘူး …
ခုလို ဖတ်ရှုအားပေးကြပါကုန်သော ….
မော်တကမော်တက လော်တကုံမော်တကလော်တကေး ……. တို့အား
နာ့ ကို လည်း မယ်တော်ကြီးလို့ ခေါ်ကြပါလားဟေ။
အနေအထိုင်ဂို မတတ်ဝူး တော်ကြာ တော်လှန်ခံနေရအူးမယ်…
ဘာလဲ …. အန်တီKZက
အိုကြီးအိုမနဲ့ မယ်တော်ကြီး ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ ဟတ်လား ….
ဖြစ်ချင်ရင်တော့ ကျင့်ထား ဘာပြောပြော ဘာရေးရေး
မယ်မယ်ကလေ …. မယ်မယ်ကလေလို့ ကျင့်ထားချေ
လောလောဆယ် မယ်တော်ကြီးဒွေ ဒစ်စကောင့်ချဖို့ အရှိဝူး ….
နာ့ကလဲဟိုဒင်းဟိုဟာပြုလေဒေါ့ ( အသက်ကြီးတာပြောဘာဒယ် ) နာ့ကိုလဲ မယ်မယ်ကြီးလို့ခေါ်ချင်ဘူး လားအေ့
မယ်မယ် ယောက်ခမွသဲကိုတော့ မယ်မယ်ဂျီးလို့ ခေါ်သင့်တာပေါ့ကွယ်။
ဒါ .. အဘ ကို သက်သက်စော်ကားတာပဲ …
ဗိုက်ထွက်လာရင် နင် တာဝံယူမှာလား အကောင် ….
သဂျီးက မှာထားပီးသားလေ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူရမယ်လို့ … ဆိုတော့
တာဝန်ကိုဘဲ ယူမယ် … အဘကိုတော့ မယူနိူင်ဘူး ….။ နင့်ပြောရင်း မှတ်မှတ်ရရ အန်စာတုံးရယ် ခု တီဘွီမှာ ထွေလာလာနေတယ် ၅၆ခန့်အဘနဲ့ ၂၂ကလေးမတို့ အကြောင်း ရိုက်ထားတဲ့ ကိုရီးယား ဒရမ်မာကား ထွေလာမှာတင် ၃ခန်းလောက် ပါနေလို့ ပိတ်ထားလိုက်တယ် အဘတွေများ စွမ်းချက် လက်လက်ကို ထနေတာဘဲ
အဘဆိုတာ ကုလားပြည်ဘက်က ဘာဘာကြီးတို့ အဘာကြီးတို့ က ဆင်းသက်လာလို့
အဘဘုတ် မှတ်ဖူးတာပဲ။ အဘ မကြိုက်တဲ့ သူငယ်လေးတွေအတွက်တော့
ဘဘဘုတ် လို့တောင် နာမည်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားပဲကွဲ့။
မှော်ဘီက လော်ဘီ အဘဘုတ်။